Muqtaar Maxamed Cali”Farmaajo waad fashilantee Fadlan naga tag aan tashanee” | Mareeg Online
Home Wararka Maanta Muqtaar Maxamed Cali”Farmaajo waad fashilantee Fadlan naga tag aan tashanee”
Muqtaar Maxamed Cali”Farmaajo waad fashilantee Fadlan naga tag aan tashanee”
Muqtaar Maxame Cali oo ka mid Siyaasiyiinta Falaqeeysa arimaha Siyaasada Soomaalia ayaa waxa uu si kulul uga hadlay kulankii ay wada qaateen Farmaajo iyo Muuse Biixi waxa uuna Muqtaar Maxmed Cali uu si cad u sheegay in arinta Farmaajo ay tahay Shibirayhoow heesa waxna uu ku faleen Soomaaliland.
Farmaajo ayaa waxa uu ku tilmaamay qof xoogaa waxa badan ka qaldanyihiin marla layiraahdo maamulka iyo la tacaamulka Bulshada waxaana uu sicad u sheegay in uu Farmaajo uu Dadka iyo Dalka Soomaaliyeed uu haadaan ku tuuray waaxana ugu baaqay in uu Dalka isaga tago.
Hadalka Siyaasiga ayaa waxa uu imaanayaa xili Magaalada Adis Ababa ee Dalka Itoobiya ay kulan kuwada qaateen Farmaajo iyo Muuse Biixi waxaana kulankaa gar wadeen ka ahaa Abii Axmed Ra,iisul wasaaraha Dalka Itoobiya.
Previous articleAl-shabaab oo la sheegay in laga saarayo Gobolka Sh-dhexe
Next articleDagaal u dhexeeya Kooxda Macawiislayda&Ciidamo Itoobiyaan ah oo Hiiraan ka dhacay
Maxay tahay sababta Maanta loo xiray Waddooyinka Muqdisho?
Aways Geedi - February 22, 2020 0
Shacabka ku dhaqan Magaalada Muqdisho ayaa saakay waxaa ay ku soo waaberiisteen iyada oo xiran yihiin qaar kamid ah Wadooyinka ku yaalla Magaalada Muqdisho,...